ကမ္ဘာ | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Tag Archives: ကမ္ဘာ
မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာကမ္ဘာသို့ပြန့်စေလိုလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် အမှန်သစ္စာကို ဖော်ကျူးသည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများ နာကြား လိုက်နာလျှင် အကျိုးရှိမည်ဟု နားလည်နိုင်သည်။ သို့သော် ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများသည် လောကုတ္တရာကို မလိုက်ပါ၊ လောကီနှင့်သာ အချိန်ကုန်နေကြသည်။ ထို့နောက် သူတို့၌ သိပ္ပံအသိပညာ လွန်စွာ လွှမ်းမိုးသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အကြောင်းကို သူတို့အား ဟောပြောသောအခါ အစဉ်အလာ အင်္ဂလိပ်စာဖြင့် အလွတ်ကျက်၍ ဟောရန်မူ မအောင်မြင်နိုင်ချေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့သည် သူတို့၏ပညာကို သူတို့ တန်ဖိုးထားလွန်းနေ သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မြန်မာ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ကမ္ဘာ, လောကီ, လောကုတ္တရာ	| Leaveacomment
တိုးတက်ဖို့ဆိုရင် . . .
တိုးတက်ဖို့ဆိုရင် . . . တစ်ချို့ကလည်း ခေတ်မီတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လာမလဲ? လို့ မြန်မာပြည် အပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားကြတယ်။ မြန်မာပြည်ကို တိုးတက်စေချင်တဲ့ စေတနာက ဒီမေးခွန်းမှာ ပေါ်နေလို့ ကျွန်တော်လည်း စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ ကူညီဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားပေးပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်က ဒီလိုင်းကို အထူးပြုလေ့လာတာ မဟုတ်တော့ တစ်ခြားပညာရှင်တွေလောက် သိချင်မှ သိမယ်။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော့်ရှုဒေါင့်က ကျွန်တော် ဖြေကြည့်မယ်။ ခေတ်မီတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံကတော့ တဖြည်းဖြည်းတော့ ဖြစ်နေတာ အားလုံးလည်း အသိပဲလေ … အစစ … Continue reading →
Posted in Articles	| Tagged Myanmar Posts, ကမ္ဘာ	| Leaveacomment
သိပ္ပံနှင့်ဘာသာရေးနယ်လုပွဲ(၂) ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုတွေ ရှိပါတယ်၊ ဘာသာရေးတိုင်းဟာ လက်တွေ့မပါလို့ အသိပညာ မပေးဘူးဆိုတဲ့ စွဲချက်ကတော့ ပြန်လည်စဉ်းစားစရာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သို့မဟုတ်ရင်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကို Religion ထဲ စောလျှင်စွာ ယေဘုယျပြုခြင်း (Hasty Generalization) လုပ်ဖို့ မသင့်တော်ဘူးလို့ ဆိုရပေလိမ့်မယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို သေသေချာချာ လေ့လာသင့်ပါတယ်၊ ဒီအကြံဉာဏ် ပေးရတာဟာ ကိုယ့်ကို လေ့လာစေချင်လို့ သက်သက်မဟုတ်ပါဘူး၊ အသိပညာဆိုင်ရာ Tags: Buddhism and Science, ကမ္ဘာ, နိဗ္ဗာန်, သိပ္ပံ
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Buddhism and Science, ကမ္ဘာ, နိဗ္ဗာန်, သိပ္ပံ	| Leaveacomment
နှိုင်းနှိုင်းချိန်ချိန် သုခမိန် တစုံတခုကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တော့မည် ရှိသောအခါတိုင်း နှိုင်းနှိုင်းချိန်ချိန် သုခမိန်သို့ ပညိနြေ္ဒ သိမ်မွေ့စေရန် အရေးကြီးပေသည်။ ဉာဏ်အမြော်အမြင် ချိန်ဆတွက်ချက်မှု မပြုဘဲ အရမ်းဆင်ကန်းတောတိုး မလုပ်ဆောင်သင့်ပေ။ လုပ်ဆောင်ရသော ကိစ္စတိုင်း၌ ရည်မှန်းချက်၊ ရည်ရွယ်ချက် ထားရှိရသည်သာ ဖြစ်လေသည်။ ရည်မှန်းချက်၊ ရည်စူးချက် မရှိဘဲ မည်သည့်ကိစ္စမှ အရမ်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုသင့်ပေ။ မိမိ၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် မိမိ ရည်မှန်းချက်အတွက် ထိရောက်စွာ Tags: Buddhism, Myanmar Posts, ကမ္ဘာ
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ကမ္ဘာ	| Leaveacomment
NIBBANA – 9
Posted on July 2, 2011 by chitnge
နိဗ္ဗာန် အပိုင်း(၉) နန်း အေးဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ကျ ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုးကြီးလို့ မြင်ဖို့ကို မလွယ်ကူလှသေးဘူး။ ငယ် နဂိုဝန်နဲ့ အပိုဝန်လို့လည်း ဆိုနိုင်သေးတယ်ဗျ။ စားရ၊ သောက်ရ၊ ရေမိုးချိုးရ — ဒါက နဂိုဝန် ဆိုပါတော့ဗျာ။ ဒီအပြင် အာရုံတွေကို အကန့်အသတ်မဲ့ လိုက်စားနေလျှင် အဲဒါ အပိုဝန်ဘဲပေါ့။ နန်း သံဝေဂ ရစရာဘဲဗျာ။ ငယ် သူတော်ကောင်းတွေက ဒါတွေကို `၀ဋ်´ တွေလို့ မြင်တော်မူကြတာဗျ။ အာရုံတွေဟာ ပျော်ပိုက်ဖို့ မဟုတ် ဘူးပေ့ါ။ ဒါ – … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ကမ္ဘာ, နိဗ္ဗာန်, လောကီ, လောကုတ္တရာ	| Leaveacomment
ကမ္ဘာကိုသာသနာပြုရာတွင် .. .. ကမ္ဘာကို သာသနာပြုရာတွင် စကားလုံး အသုံးအနှုန်းများ အရေးကြီးလေသည် .. .. ဥပမာ —- “နိဗ္ဗာန်၌ ဘာမှမရှိ” ဆိုသော စကားကို ၄င်းတို့သည် လွန်စွာမုန်းကြလေသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် ဘာမှမရှိသော အရာအတွက် ရှိသောကောင်းသော အရာတွေကို စွန့်လွှတ်ရမည် ဆိုသည်ကို ၄င်းတို့သည် မမှန်းဆနိုင်တတ်ချေ .. .. ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်မှာလည်း ဘာမှမရှိသည့် အရာအတွက် စွန့်စွန့်စားစား လုပ်ကိုင်နေရသည် ဆိုသည်ကို တန်ဖိုးမထားတတ်နိုင်ချေ – … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ကမ္ဘာ, နိဗ္ဗာန်, ဗုဒ္ဓဘာသာ, လောကီ, လောကုတ္တရာ	| Leaveacomment